Chris Jeriko dia hiara-hiasa amin'ny Première Premiere 'The Last Drive-In'
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Chris Jeriko dia hiara-hiasa amin'ny Première Premiere 'The Last Drive-In'
by Waylon Jordan Aprily 14, 2020
nosoratan'i Waylon Jordan Aprily 14, 2020
Ry superstar mpiady, Chris Jeriko dia hiara-miasa amin'ny premiere premiere an'ny vanim-potoana Ny Drive-In farany niaraka tamin'i Joe Bob Briggs ao amin'ny sehatra streaming streaming mampatahotra / mampientanentana rehetra an'ny AMC Shudder.
Ilay mpikomy sy mpitendry zavamaneno dia niditra tao amin'ny Twitter hanambara ny vaovao.
Miaraha amiko amin'ny praiminisitra fizaran-taona @thelastdrivein w @therealjoebob & @kinky_horror amin'ny 24 aprily IHANY amin'ny @Shudder! Jereo hoe ahoana no ahafahanao mahazo andrana 30 MAIMAIMPOANA IZAO! pic.twitter.com/x6WmCBFeWK
- Chris Jeriko (@IAmJericho) Aprily 14, 2020
Na dia nafenin'izy ireo tsiambaratelo aza ny atin'ny fizarana, dia nandatsaka torolàlana vitsivitsy ho an'ny mpijery izy ireo. Tao anatin'ny fanambarana iray dia nanoratra i Jeriko:
"Rehefa nangataka ahy i Joe Bob Briggs mba hijery sarimihetsika misy zana-tsipìka, minono ati-doha, backgammon ho an'ny tarehimarika, mini-Oates maniacal ary alika kely, hoy aho hoe: amin'ny firy sy amin'ny inona no zaridaina?"
“I Chris Jeriko no toetran'ny tolona mampihetsi-po indrindra izay nanjary sakaiza nahatsiravina nanomboka teo Rowdy Roddy Piper niara-nampiantrano Velona ry zareo! miaraka amiko ato amin'ny TNT taona lasa izay, ”hoy izy Ny Drive-In farany mpampiantrano Joe Bob Briggs tamin'io fanambarana io ihany. “Raha ny marina dia i Jeriko no mety ho mpiady kalaza malaza indrindra eto an-tany amin'izao fotoana izao, tsy lazaina intsony ny mpihira fironana ho an'ny tarika vy izay nandahatra teo amin'ny Billboard niaraka tamin'ny hiram-pirenena fantatry ny mpankafy kianja an'arivony maro. Hizara ny seza fampiantranoana an'i Chris aho mba hahafahany mandeha am-pitolomana amin'ny krizy mampihoron-koditra fitopolo izay efa adala hatramin'ny nianarany tany amin'ny lise. Atleta eran-tany, podcaster, mpilalao sarimihetsika, mpitendry zavamaneno izy - tena andian'olona iray mahafinaritra ny kolontsaina pop-izy ary amin'ny 24 aprily dia hanaporofo izy fa bandy bandy mandroaka ihany koa. ”
Aza adino ny premiere fizaran-taona Ny Drive-In farany niaraka tamin'i Joe Bob Briggs amin'ny Shudder amin'ny 24 aprily 2020!
Tsy manana famandrihana? Manolotra fanandramana mandritra ny 30 andro ny serivisy mivantana miaraka amin'ny kaody Promo ianao: SHUTIN dieny izao Shudder.com.
Fampisehoana teatra amerikana 'Psycho amerikana' 20 taona lasa izay!
Mahatadidy ny 'Fandrika amin'ny alina', ilay lalao niteraka rafitra fanamarihana